ရွှေပန်း၏ကျိန်ခြင်း Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 10, 2007 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 11, 2007 Douglas Karr
ငါဘလော့ဂ်မှာရုပ်ရှင်အကြောင်းပြောနေတာမသေချာဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်သားအတွက်ကြီးမားသောရုပ်ရှင်သတင်းပတ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် Blockbuster Online သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီးအလွန်အေးသည်။ မင်းငါ့ကိုသိရင်ဒေသခံမိသားစုဗီဒီယိုကနေငှားရမ်းတာဟာအရမ်းခက်တယ်ဆိုတာမင်းသိလိမ့်မယ်။ Blockbuster ၌ကျွန်ုပ်၏ ၀ မ်းသာဖွယ်ဟာသကို သုံး၍ အကြိမ်တိုင်းကျွန်ုပ်၏နောက်ကျကြေးများကိုလျှော့ချသောလှပသောအမျိုးသမီးများမရှိကြပါ။ ဤတွင်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုမည်သို့ရှိသနည်း။
BVL: မစ္စတာကာရန်, သင်နောက်ကျသောအခကြေးငွေအတွက် $ 14.00 ရှိသည်
Mr. Karr: သင်လုံးဝလှပသည်! ရည်းစားရှိလား?
BVL: Uhhh (ပြုံးသည်) ... ဟုတ်တယ်။
Mr. Karr: ကောင်းပြီ၊ ဒီညသူ့ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူကသူဖြစ်ကြောင်းပြောဖို့သေချာတယ် အ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ကံကောင်းထောက်မစွာလူသည်။
BVL: (အပြုံးများ၊ ပါးများအနီရောင်)
Mr. Karr: တောင်းပန်ပါတယ်…မင်းကအရမ်းလှတယ်၊ မင်းပြောတာကိုမကြားခဲ့ဘူး!
BVL: အိုး…မင်းမှာနောက်ကျတဲ့အခကြေးငွေတွေရှိခဲ့ပေမယ့်ငါမင်းတို့ကိုမင်းတို့သူတို့ကိုပြောပြပါ၊ မင်းတို့အားလုံးကိုဒီညပေးရမယ်၊ ငါတစ်ဝက်လောက်ပဲပေးမယ်။
Mr. Karr: wow လှပပြီးရက်ရက်ရောရော။ မင်းစိတ်ကူးနေတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!!
အခုဒီအဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးမှာမင်းမမြင်၊ မကြားတာတွေကငါ့ရဲ့ကလေးတွေပါ။ ကောင်တာထိုးလိုက်တာနဲ့ငါ့သားချက်ချင်းလမ်းလျှောက်သွားတယ်။ သူဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသူသိတယ်။ ငါ့သမီး, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါ shtick စဉ်အတွင်းငါကဒီမှာနေဖို့နှင့်သကြားလုံးဘို့ငါ့ကိုမေးတယ်။ ငါပေးပြီးနောက်သူမကအမျိုးသမီးများကိုကျွန်ုပ် ၀ င်လာတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်အသက်မည်မျှ၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်မျှအပူတပြင်း၊ ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသောမီးခိုးရောင်ဆံပင်များမည်မျှရှိသည်ကိုပြောပြသည်ကိုနှစ်သက်သည်။ သူ့ကိုဘုရားသခင်ချစ်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်! ငါ digress သင်မော်ကွန်းရုပ်ရှင်များ၊ ရှိတ်စပီးယားဖြစ်ရပ်များနှင့် / သို့မဟုတ်ကိုယ်ခံပညာရုပ်ရှင်ကားများကိုချစ်မြတ်နိုးပါကရွှေပန်း၏ကျိန်စာသုံးမျိုးစလုံးရှိသည်။ ဒီရုပ်ရှင်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးဇာတ်ကားတွေမှာရိုက်ကူးထားပြီးတောက်ပတဲ့အရောင်၊ ငါရုပ်ရှင် riveting တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ငှားရမ်းသို့မဟုတ်ဝယ်!
အပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူအပြည့်အဝ DVD ကိုကြည့်ရှုရန်သေချာစေပါ။ ရုပ်ရှင်ကိုမည်သို့ရိုက်ကူးခဲ့ပုံနှင့်ထိုးဖောက်ရန်အတွက်သရုပ်ဆောင်များ၏လုပ်အားအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှု။
FeedBurner သို့သင်၏ Feed ကိုမထည့်ပါနှင့်
ဧပြီ 10, 2007 မှာ 9: 31 pm တွင်
ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မမကြာသေးမီက "blockbuster ဆုလာဘ်" အစီအစဉ်တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ရှင်အကြံပြုချက်များမှာ Click နှင့် Eragon ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ရုပ်ရှင်ကိုမေးလ်ထဲမှာခံစားကြည့်ပါ။
ဧပြီ 14, 2007 မှာ 5: 57 pm တွင်
LOL …ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ပျမ်းမျှအားဖြင့် Blockbuster ကောင်တာနှင့်အဆင်မပြေပါ။ ငါ့မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ သူကသူ့ Experian အကြွေးအစီရင်ခံစာမှာဒေါ်လာ ၄၉၈ နှောင်းပိုင်းကျတယ်။ သူဖြစ်ကောင်းထိုက်တန်ပေမဲ့ wow …
ဧပြီ 14, 2007 မှာ 6: 07 pm တွင်
ဟုတ်ပါတယ်, Blockbusters မှာယောက်ျားတွေဖြစ်ကောင်းကတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ $ 498?! Ouch! သူကလှည်းနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာပြီးဘယ်တော့မှပြန်လာမလာသလိုပဲ! သူကဂိမ်းကစားတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုငှားလိုက်ရင်လား။